Fivavahan'ny famoizam-po ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Vavaky ny famoizam-po
La vavaky ny famoizam-po Tena ilaina izany, indrindra rehefa mifankatia ianao, satria manandrana manao izay rehetra azo atao ianao ary tsy afaka mitazona ny fifandraisana na manintona ny sain'ny olona hafa aza, na izany aza, mety tsy liana amintsika io olona io. Eo izy io, rehefa manomboka miseho ny tsy fananana fanantenana sy famoizam-po, satria misy fiantraikany amin'ny fahatsapantsika izany ary miteraka fahafoizan-tena lehibe, toy ny hita amin'ity vavaka ity; Raha te hahalala vaovao misimisy kokoa ianao dia aza misalasala manohy mamaky ilay lahatsoratra.
Fantaro izay rehetra tokony hataonao amin'ity fehezanteny ity
1 Inona ny vavaky ny famoizam-po?
2 Inona no atao hoe fitia?
2.1 Vavaka famoizam-po natao ho an'ny lehilahy iray
2.2 Ny vavaka entina mamerina ny olon-tiana
2.3 Vavaka Dominion
2.4 Ilay vavaka mba hiheveran'izy ireo ahy fotsiny
2.5 Ny vavak'ilay miverina avy hatrany
2.6 Vavaka manintona fitiavana haingana
2.7 Vavaky ny famoizam-po ho an'i Masindahy Marka
2.8 Vavaka sy eritreritra mamoy fo
2.9 Vavaka manintona ny fitiavana
2.10 Vavaka hamatorana an'i San Marcos de León
Inona ny vavaky ny famoizam-po?
Araka ny voalaza etsy ambony rehefa tsy mamaly ny fitiavana, ny famoizam-po no manao zavatra ary noho izany dia lasa afaka manao sorona, sorona (zavatra, fombafomba, hira, sns.) Na ozona mihitsy aza isika, ho takalon'ny fahazoana izany fitiavana tiana izany. Amin'izao fotoana izao dia rehefa, mieritreritra isika ary mitady ireo vavaka tsara indrindra hampitony ny famoizam-po na hahatratra ilay tanjona.
Mahery sy mahery io vavaka io, rehefa mivavaka ny stanza ilay olona, ​​miantso ny fidiran'ny Olomasina isan-karazany, toy ny: San Marcos de León, Santa Rita, Santa Marta San Gregorio, Thaumaturgo, Masindahy Jude Thaddeus, y Santa Filomena los cuales son muy conocidos por ser seres muy ligados al Kristianisma.
Ny fahatsapana ny fitiavana dia iray amin'ireo fihetseham-po izay miteraka fahasambarana sy fifaliana indrindra amin'ny olona iray. Izany no antony amin'ny fotoana tsara indrindra amin'ny fitiavanao dia azonao atao ny mahatsapa ny fahafenoana, ny eritreritra, ny nofy, ny fanantenana ary ambonin'ny fahatokisana rehetra, na izany aza, misy ihany koa ny fotoan-tsarotra ary mahatsapa ho fadiranovana ny mpivady, tsy miraika, tsy mihetsika, tsy matoky tena na matahotra be; fa ambonin'izany rehetra izany famoizam-po, satria tahotra na fijaliana no mipoitra ny fahaverezan'ny olona tianao.
Rehefa tonga io fotoana natahorana na tsy fanantenana io dia manomboka manao izay rehetra azo atao ny olon-tiana ary indraindray tsy azo atao mihitsy mba hijanonan'ny olon-kafa eo anilany na hanohina ny fony aza, mpivady maro no tsy mahalala ny fomba hitazomana ilay fitiavana. tamin'ny fiainany; Na izany aza, tsotra kokoa noho ny toa izy io, mila fehezanteny tsotra sy tsotra fotsiny izy ireo. Ka hiresaka momba ny andraikitry ny vavaky ny famoizam-po amin'ny fanampiana hahatratra ilay fitiavana tadiavintsika isika.
Na dia misy aza ny fiainana amin'ny fianarana miatrika olana maro sy fahantrana hahatratrarana fahasambarana, dia misy koa ny fifanoherana eo amin'ny fitiavana ary matetika miteraka ahiahy. Mampivelatra ny ankehitriny, dia miresaka momba ny vavaky ny famoizam-po, izay manolotra fizarana fehezanteny ihany koa, izay mifantoka indrindra amin'ny olan'ny fitiavana.
Vavaka famoizam-po natao ho an'ny lehilahy iray
Ity vavaka ity dia tokony hatao amin'ny volana fenomanana mba hahatonga ny lehilahy ho kivy, zava-dehibe ny fanatanterahana an'io vavaka io amin'ny fomba tsara, mahery tokoa izy io, ao anatin'ny fotoana fohy dia miditra an-tsehatra ny sainy; ary noho izany dia ataovy izay hifantohan'ny sainao irery ihany. Ny vavaka dia tsy maintsy atokana ho an'ny fanahin'ny famoizam-po amin'ny alàlan'ny fametrahana sy fandrehitra labozia fotsy, tsy maintsy averina mandritra ny 3 andro misesy.
La Vavaka hamerenana ilay olon-tiana
Ity fizarana ny vavaky ny famoizam-po Ampiasaina be izy io, indrindra amin'ny toe-javatra ialan'ny olon-tiantsika na ny malalantsika, mamela antsika irery. Tsy maintsy vonoina amin'ny fomba matotra izy io, amin'ny hery ary amin'ny fanoloran-tena lehibe. Ilaina ny mamerina azy intelo ary ho hitanao eo noho eo ny valiny, koa, tokony ho fantatrao fa tena mandaitra amin'ny lafiny ara-panahy an'ny lahy sy ny vavy.
Ity fombafomba ity dia manatanteraka fanaraha-maso tanteraka ny zavatra tadiavin'ny olona iray; Izany dia mahatonga ny olona tsy hanana fahefana hanapa-kevitra ary miankina amin'ny sitrapon'ny hafa. Mba hanatanterahana an'io ody io dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao: tsy maintsy atao isaky ny alahady ihany, eo anelanelan'ny ora: sivy sy roa ambin'ny folo alina; avy eo soraty amin'ny ranomainty mena ny fehezan-teny.
Ilay vavaka mba tsy hieritreretan'izy ireo fotsiny ahy
Natao ho an'ny olona tianao izany, ny momba anao fotsiny no eritreretinao; Tsy mila mampiasa fitaovana ianao, afaka manao azy amin'ny fotoana sy andro rehetra, tsy mila faritra manokana, ny ilainao dia ny mamokatra ny hery ny finoana. Amin'ny farany dia tsy maintsy miampita ny tenanao ianao ((manaova ny famantarana ny hazofijaliana), intelo ary tsy maintsy teneninao ity fehezanteny manaraka ity, ka izany no izy.
Ny vavak'ilay miverina avy hatrany
Manana tanjona roa ity vavaka ity: ny voalohany, mba hitady fomba ahafahan'ny olona nandao ny fanambadiana hiverina na hiverina avy hatrany. Ary ny tanjona faharoa dia ny famporisihana an'io olona io hanomboka fibebahana hahatratra ny fanamafisana. Ho an'ny vavahady fidirana dia angatahana ny Fitsaran'ny anjely any an-danitra.
Vavaka manintona fitiavana haingana
Ny vavaky ny famoizam-po hanintonana fitiavana haingana dia aseho amin'ireo olona izay tena sarotra ny mitady vady. Manoloana an'io olana io dia mandeha izahay mangataka amin'Andriamanitra Ray, mba hampiasàny ny heriny amin'ny alàlan'ny heriny masina ary ho tratra ilay olona manome antsika fitoniana tadiavinao.
Vavaky ny famoizam-po ho an'i Masindahy Marka
Io vavaka io dia ampiasain'ny mpanaraka Katolika indrindra satria Mark dia akaiky an'i Saint Peter. Vavaka tena mahery sy mahery azo ampiharina amin'ilay olona maniry izany.
Vavaka sy eritreritra mamoy fo
Ity vavaky ny famoizam-po ity dia ankinina amin'i San Cipriano, izy io dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fandrehitra labozia manga, miaraka amin'ny sarin'ny olomasina.
Vavaka manintona ny fitiavana
Amin'ity vavaka famoizam-po ity dia azonao atao ny mahazo ilay olona ao anatin'ny 24 ora. Miankina amin'ny herin'ny finoana sy ny tanjaky ny finoana ny zava-bitany; Natao ho an'i Masindahy Jude Thaddeus io, tsy maintsy mivavaka miaraka amina sary eny an-tanantsika izy ary mandrehitra labozia mavo, tsy maintsy avela hazava rehefa vita ny vavaka.
Vavaka hamatorana an'i San Marcos de León
Vonoina amin'ny fomba mahazatra izy io mba hampandehanana olona, ​​mitondra fandriam-pahalemana amin'izay tsapany fa tsy misy izany; Azo ampiasaina ho an'ny olona manokana, mpiara-miasa, sakaiza, na olon-tiana tsotra izao. Sombina iray dia:
San Marcos de León, amin'ny anaran'Andriamanitra no iangaviako anao, Fanahin'ny fitondrana,
Fanahin'ny famoizam-po, fanahy tsy milamina,
Miresaka amin'izy ireo aho mba hahafahan'izy ireo manampy ahy hanjakazaka,
mamoy fo sy manelingelina ny saina, eritreritra,
Will sy ny fitsarana ny (…) ho ahy fa ny anarako dia (…).
Atolotro ny anjely mpiambina masin'i (…) ity vavaka ity
Raha tianao ny fampahalalana avelanay anio ho anao, aza misalasala manohy mianatra bebe kokoa momba ny bilaoginay sy mamaky Teny ho an'ny maty. Ho fanampin'izay, izahay koa dia manana horonantsary izay hanampy anao amin'ny fanontanianao rehetra.
Rosary an'ny Virjin'i Guadalupe
Zoma Rosary Masina
Alarobia Masina Alarobia
Andianteny fohy ho an'ny maty